Wasaaradda Ganacsiga XFS oo mamnuucdey Hubka caagga ka sameysan oo ay carruurta ku ciyaaraan – Radio Muqdisho
Wasiirka Ganacsiga Xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye), ayaa wareegto uu soo saaray ku mamnuucay in ganacsatada ay soo dejin karin Toys-ka ka sameysan Hubka Caagga ah ee ay ku ciyaaraan carruurta munaasabadaha ciidda.
Wasaaradda, ayaa ganacsatada ku wargalisay in aysan dalka keenin waxyaabo dhib keeni kara, taa badalkeedna ay bulshada ku dhiiri galiyaan nabadda.
Wareegtada, ayaa sidoo kale faraysa ganacsatada inay dhaqan geliyaan amarkan heer walba, ha joogaan dawlad goboleedyada iyo caasimadaba.
Telefeshinka Qaranka ayaa xalay baahiyey warbixin ku aadan dhibaatada amni iyo mida caafimaad ee dhallaanka ka soo gaari karta hubka caagadaha ka samaysan ee maalmaha ciidda loo iibiyo.
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Dawladda Jabuuti uga Mahad-celiyay Tababarka Ciidamada Soomaaliyeed “SAWIRRO”
Madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug oo mashaariic horumarineed ka dhagax dhigay magaalada Dhuusamareeb “SAWIRRO”